के तपाई लाई नि यस्तो भएको छ ? कसैले आफ्नो सरिर छोपे जस्तो आफु बोल्न खोज्दा आवाज निस्किदैन हेर्नुस त ! - Aajako Nepali Khabar
के तपाई लाई नि यस्तो भएको छ ? कसैले आफ्नो सरिर छोपे जस्तो आफु बोल्न खोज्दा आवाज निस्किदैन हेर्नुस त !
admin - March 6, 2021 March 6, 2021
म यहाँ नयाँ छु। म नयाँ बनेश्वर, काठमाडौंबाट आएको हुँ। यो भएको थियो जब म 15 वर्षको थिए। म मेरो साथीको जन्मदिनको पार्टीबाट फर्किरहेको थिए, जुनको रातमा थियो।
म र मेरो साथी नयाँ बानेश्वर रोडमा हिंडिरहेका थियौं। मेरो साथीको घर नयाँ बानेश्वर नजिकै थियो र उसले मलाई उसको घर बस्न भन्यो तर मैले उनलाई बेवास्ता गरें र म एक्लै हिँड्छु। म राती ११ बजे सम्म अँध्यारो मध्य रातको बाटोमा एक्लै हिंडिरहेको थिएँ। एउटा सानो गल्ली (गल्ली) मा पुग्दा म हिंड्दै र हिंड्दै थिएँ। गल्ली धेरै शान्त थियो तर म डराएको छैन। अन्तमा, म आफ्नो घर पुगेँ,
मेरो आफ्नै कोठा थियो। मेरो कोठामा दुईवटा झ्यालहरू थिए। एउटा झ्याल मेरो ओछ्यानमा जोडिएको थियो, अर्को पट्टि अर्को छेउमा थियो। मैले मेरो जोडिएको विन्डोबाट आकाश र बाहिरका झाडीहरू देख्न सक्छु।
त्यो समयमा म सुत्न कोशिस गर्दै थिए तर म सुत्न सक्थे। मैले निदाउनको लागि मात्र आँखा बन्द गर्ने प्रयास गरें तर यो आफैं खोल्नेछ। यो धेरै पटक दोहोर्याइयो। जब म बिस्तारै मेरा आँखाहरू बन्द गर्छु किनकि म सुत्न चाहन्छु, यो फेरि बिस्तारै खोलियो।
अचानक मैले झ्यालबाट केही हेरे र मलाई हेरे। जब मैले उसको अनुहार हेरे, उनको अनुहार जलिरहेको वा बिग्रिएको जस्तो थियो; यो धेरै डरलाग्दो देखिन्थ्यो।
मैले उसको अनुहार देखेपछि मेरो शरीर सार्न सकेन। मेरा हात, खुट्टा र मेरो सम्पूर्ण शरीर सार्न सक्दैन र न त म एउटा शब्द पनि बोल्न सक्दछु। भूतले मेरो सम्पूर्ण शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्यो। केहि सेकेन्ड पछि, म २० देखि 3० सेकेन्डमा सोच्दछु, भूत गएको थियो। यो मेरो शरीर बाट जादै गरिएको थियो। म मेरो ज्यान सार्न सक्छु।
त्यो घटना पछि, म समय जाँच गर्नका लागि मेरो फोनमा हेरी। यो राती १२:०० बजेको थियो। अचम्मको कुरा, म अब डराएको महसुस गरिन। म चाहान्छु कि म वास्तवमै “भू#त ” संग लड्न सक्छु। मैले कहिले पनि यो अलौकिक अनुभव भनेन, मेरो परिवार वा मेरा साथीहरूलाई। यो पहिलो पटक मैले कसैलाई यो कथा भन्दै छु।
यो मसँग पछि कहिले भएको छैन। म साँच्चिकै जान्न चाहन्छु किन त्यो रात मेरो साथ भयो? यदि मेरो घर प्रेतवाधित भएको भए, यो घ#टना अघि वा पछि मलाई भएको थियो। यो १० बर्ष भएको छ र मैले फेरि त्यस्तो चीज अनुभव गरेको छैन!
३७ वर्षअघि पाटनबाट चो#रिएको मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण
धर्मेन्द्र बास्तोला: हाम्रो पार्टीले ह#तियार लिएर ल#ड्ने सश#स्त्र यु#द्ध गरेको होइन